Type C Charger, Voltage Stabilizer, Sine Wave Ups - Staba Electric
Nanomboka tamin'ny taona 2017, nanomboka nanao fikarohana sy fampandrosoana ny vokatra charger PD GaN i Staba.GaN tech dia ny revolisiona ny indostrian'ny charger, ity charger ity dia afaka mampiasa transformer kely kokoa sy singa inductive hafa, amin'izay mampihena ny haben'ny charger GaN sy ny famokarana hafanana, ary fanatsarana ny fahombiazana…
Portable fast gan type c adapter wall usb charger PD 18W
Seranan-tsambo seranana vaovao multi-boat vaovao USB charger PD30W
USB manara-penitra haingam-pandeha haingana rindrambaiko USB charger PD30W
Rindrina haingam-pandeha maivana haingam-pandeha USB adapter 65W mahery
Portable muti port vaovao farany finday charger finday PD100W
Te hanana fahefana bebe kokoa, fa haingana kokoa? Ity GaN tech vaovao ity dia milaza fa afaka manolotra
Ny andro fitaterana biriky herinaratra goavambe sy tariby maromaro hitazomana ny fitaovanao dia mety ho tapitra. Ny ora fiandrasana ny smartphone na solosainao findainy handoavam-bola, na ny fahagagana amin'ny charger mafana mampatahotra, dia mety ho lasa zavatra taloha ihany koa. Tonga eto ny teknolojia GaN ary mampanantena ny ...
Inona ny atao hoe famindrana herinaratra USB?
Na izany aza, ity olan'ny fampifanarahana ity dia saika ho lasa taloha tamin'ny fampidirana ny famaritana Power Power USB. Ny fandefasana herinaratra USB (na PD, raha fintinina) dia fenitry ny famahanana tokana izay azo ampiasaina manerana ny fitaovana USB rehetra. Raha ny mahazatra, ny fitaovana tsirairay ampiasan'ny USB dia hanana ny ...
Inona ny Gallium Nitride?
Gallium Nitride dia semiconductor bandgap mivantana mivantana III / V izay mifanaraka tsara amin'ny transistors mahery vaika afaka miasa amin'ny hafanana ambony. Hatramin'ny taona 1990 dia nampiasaina matetika tamin'ny diode emitting light (LED) izy io. Gallium nitride dia manome jiro manga ampiasaina amin'ny famakiana kapila ao amin'ny Blu-r ...